Xaaladii ugu dambeeysay ee Muqdisho. – Voice of Somalis In Exile
(Mogadishu) 12th of june, 2020 (aminawehelie.me)-Intabadan Golaha wasiirada ayaa ka hor-yimid codsi kaga yimid agaasimaha heyadda sirdoonka qaranka ee NISA, Fahad yaasiin Xaaji Daahir, codsigaas oo ahaa, inay is casilaan si culays siyaasadeed loo saaro Ra’iisulwasaare Xasan Cali Khayre.
Wasiirada badankood ayaa taageersan siyaasada Rwasaaraha ee ah in dalka laga badbaadiyo fat-qalalo siyaasadeed lana qabto doorasho la isla ogol yahay., halka qaar badan oo wasiirada ka mid ahina ay ku daabban yihiin xisbiyada isku diyaarinaaya doorashooyinka.
fikrada Ra’iisulwasaaraha waxaa taageersan, beesha caalamka iyo maamul goboleedyada intabadan taasoo loo arko mid dalka u horseedaysa daganaansho siyaasadeed iyo horumar.
warar xog-ogaal ah ayaa sheegaya in saamilayda siyaasada iyo beesha caalamka ay taageerayaan, Ra’iisulwasaare Xasan Cali khayre haduu isu soo sharaxo xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Fahad Yaasiin, Agaasimaha heyadda sirdoonka Qaranka ee NISA, wuxuu doonayaa in xoog xilka loogu haayo madaxweyne Farmaajo oo uu garab iyo gaashaanba u yahay, iyadoo la adeegsanayo ciidamada Itoobiya iyo dhaqaalaha dawlada Qadar.
Ra’iisulwasaare Khayre, wuxuu ka soo horjeedaa in dadka Soomaaliyeed loogu hanjabo awood iyo ciidamo shisheeye iyo dhaqaale dawladocarbeed.
Fahad yaasiin, markuu ku hungoobay golaha wasiirada, ayuu caawa bilaabay inuu xildhibaano laxiriiro si mooshin looga diyaariyo Khayre.
wixii arimahan ku soo kordha waanu idinla soo socodsiin doonnaa, haddii Alle yiraahdo.
One thought on “Xaaladii ugu dambeeysay ee Muqdisho.”
Ahmed saiid mohamud says:
Layaab fahad yasin mar waa mooshin aruuriye mar waa sirdoon xagee buu xisabsanyahay
Dal mar hore geeriyooday ayaan ku nool nahay
Umaduhu markey hormareen anagu waan sii noqoneenaa hoos u dhac lee iga dheh wax kle majiraane Dadka soomalia ku nool gaar ahaan Mogadishu Allaah ayay qabaan Aniguba aan ku jiree